MACLUUMAADKA IYO SAWIRO MUUJINAYA EYGA SHEPHERD DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawiro Muujinaya Eyga Shepherd Dog
Indy adhijirka Belgium
Liistada eeyaha reer Belgium ee loo yaqaan 'Shepherd Mix' eeyaha
Adhijirka reer Belgium Groenendael
Sheepdog Belgian ah
Jidhka Sheepdog Belgian si fiican ayaa loo miiray, oo leh maqaar cidhiidhi ah iyo jidh isku dheelitiran. Cabirka guud ee madaxu waa inuu ahaadaa mid u dhigma jirka. Dhakada qalfoofkeeda waa la simay halkii laga meermeeri lahaa. Afka waxaa si dhexdhexaad ah loogu tilmaamay joogsi dhexdhexaad ah. Faruuryaha waa inay adkeeyaan. Qaniinyada eeyga waa inuu noqdaa xitaa ama maqas. Indhaha dhexdhexaadka ah, yicibta u eg waxay u eg yihiin bunni. Dhegaha kacsan waa saddex-xagal qaab iyo u dhigma madaxa. Lugaha ayaa is barbar socda, toosan oo xoog leh. Dabada baalasha leh ayaa ku xoog badan salka iyada oo lafta dabadu gaadhay hock. Waxaa inta badan laga saaraa soo deynta. Cagaha ayaa qaab bisad u eg. Koodhka cimilada u adkaysta waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah, oo leh dhogor dhogor qoorta ah iyo baalal dheeri ah oo lugaha ah, dabada iyo jirka hoostiisa. Midabka jaakadu waa madow, ama waa adag yahay ama qadar yar oo cadaan ah ayaa ku jira laabta, garka ama suulasha.
Adhijirka reer Belguim / Groenendael waa midka ugu caansan afarta ey adhi ee reer Belgium. Waa eey aad u dhalaalaya oo adeecsan, go'aansaday oo fiiro dheer u leh ilaalin xoog leh iyo dareen dhuleed. Noocani wuxuu u baahan yahay ballaaran is dhexgalka bulshada , doorbid ahaan laga bilaabo da'da hore, si looga hortago inay noqoto mid xishood badan ama xasaasi ah. Adhijirka reer Belguim waxay u baahan yihiin sayid khibrad leh oo adag, laakiin aan gacan culus lahayn. Haddii aad tahay qof qallafsan ama ka badbadis badan waxay noqonayaan kuwo aan la shaqeyn karin. Milkiilayaashu waxay u baahan yihiin inay muujiyaan kalsooni, maamulka dabiiciga ah eyga dushiisa. Shuruucda iswaafaqsan waa in la dejiyaa oo la caddeeyaa. Noocani waa mid si dabiici ah u ilaaliya sidaa darteed waa in si wanaagsan loo tababaro oo la dhexgalo bulshada laga bilaabo da'da hore. Eydu waa inay dhexgalaan bulshada isla marka ay dhashaanba. Kufiican shaqada iyo adeecida tartanka. Eeyahaani waxay sameeyaan boolis heer sare ah iyo eeyaha ilaaliya . Shaqada noocan ahi hadda waa shaqadooda ugu weyn. Si kastaba ha noqotee, waxay sameeyaan xayawaan aad u fiican haddii ay leeyihiin milkiileyaal caqabad ku noqon kara maskaxdooda hawo hoggaamineed. Weligood waa feejignaan, feejignaan iyo daacad. Sheepdogs-ka reer Belguim waxay ku fiican yihiin carruurta haddii ay si wanaagsan ula dhaqmaan iyaga. Noocani wuxuu u baahan yahay inuu ka mid noqdo qoyska oo aan lagu xirin aqal. Waxay u baahan yihiin hoggaamin, jimicsi maalinle ah oo ay weheliso tababar iyo wehel, waayo la'aanteed waa laga yaabaa inay noqdaan noqo mid wax dumiya oo ay adag tahay in la maareeyo. Adhijirka reer Belguim waa tamar sare, oo leh awood maskaxeed oo sarreysa, waana mid dhaqso u fahma. Waxay u baahan yihiin shaqo ay qabtaan, gaar ahaan haddii aad la macaamilayso khadadka shaqada. Ka taxaddar marka aad soo bandhigayso eeygan xayawaanka yaryar ee aan xayawaanka ahayn . Waxay noqon karaan kuwo ku xoog badan eeyaha kale waxayna u baahan yihiin milkiile la xiriiri kara eeyga in xukunku yahay dabeecad aan loo baahnayn. Waa haddii ay si sax ah ula dhexgalaan bisadaha iyo xayawaannada kale, waa inaysan soo bandhigin wax dhibaato ah. Sheepdog-ga Belgian ayaa laga yaabaa inuu si dabiici ah u soo bandhigo dhaqashada xoolaha sida cayrsashada iyo wareegga, dhaqaaq la’aanta saacado badan iyo ka siibidda cagaha dadka. Waa in la baraa inaysan dadka sidan ku sameyn. Tani waa eey aad u baahan oo aad iyo aad u sii caan baxaya. Waxay ubaahantahay milkiil khibrad leh waayo way sahlanaan kartaa in la xakameeyo ilaa milkiiluhu uusan garaneyn sida loola macaamilo mooyee. Qaabka mulkiiluhu u maareeyo eeyga wuxuu soo saari karaa kala duwanaansho ballaaran oo ku saabsan dabeecadda iyo gardaro . La hadal qof khibrad u leh nooca ka hor intaadan iibsan eeygaaga. Eeyahaani badiyaa waa kuwo cajaa'ib leh hana ku salayn iibsashadaada kaliya diiwaanada waxqabadka iyo muuqaalada. Kaliya korsado noocan oo kale ah ee eyga ah haddii aad si buuxda u fahanto waxa loola jeedo alfa .
Miisaanka: Ragga 65 - 75 rodol (29 - 34 kg) Dumarka 60 - 70 rodol (27 - 32 kg)
Noocan adag, ee caafimaadka leh ma laha welwel caafimaad oo weyn. Qaar ka mid ah walaacyada yar-yar ee la arkay waa suuxdin, xasaasiyadda maqaarka, dhibaatooyinka indhaha, xishood xad dhaaf ah, gardarro xad-dhaaf ah iyo mararka qaarkood sinta dysplasia iyo xusulka dysplasia. Ha ka badin noocyadan, maxaa yeelay waxay u janjeeraan inay noqdaan cayil iyo caajis.
Adhijirka reer Belguim / Groenendael wuxuu ku fiicnaan doonaa guri dabaq ah haddii si ku filan loo jimicsado. Waa mid si dhexdhexaad ah uga dhex shaqeysa gudaha waxayna ku fiicnaan doontaa ugu yaraan deyr dhexdhexaad ah. Groenendael wuxuu ku seexan karaa banaanka, in kasta oo uu doorbido inuu la joogo dadkiisa.
Kani waa eey shaqeeya oo caadeystay nolol banaanka ka firfircoon. Sidan oo kale waxay u baahan tahay jimicsi fara badan, oo ay ku jiraan a socod dheer maalin kasta . Intaas waxaa sii dheer, waxay si weyn uga faa'iideysan doontaa ka maqnaanshaha xarigga inta ugu macquulsan ee aag aamin ah.
Adhijirka reer Belguim / Groenendael wuxuu leeyahay dhaadheer, toosan, dherer dhexdhexaad ah, jaakad culus oo culus iyo jaakad cufan oo u baahan shanlo maalinle ah iyo cadayasho. Feejignaan dheeri ah waa in la bixiyaa marka eygu daadinaayo. Ka soo dheji gogosha qaabeysa, gaar ahaan ruffanka iyo lugaha, timahana ka soo laabo suulasha dhexdooda iyo dhegaha dibadda. Noocani waa xilli xaadir culus oo xilliyeed, daadiya laba jeer sanadkiiba iyada oo xoogaa daadis ah sannadka oo dhan.
The Belgian Groenendael, sida loogu yeero adduunka oo dhan, waxaa si fudud loogu magacaabaa Adhijirka Belgian ee Naadiga Kennelka Mareykanka. Waxaa loogu magac daray tuulada Groenendael ee dalka Belgium. Waa mid ka mid ah afarta nooc ee lo'da reer Belgium, Groenendael-ka Beljamka, Reer Biljim Belgian , Beljamka Tervuren , iyo kan ugu caansan Belgian Laekenois , in dhammaantood wadaagaan aasaas guud. Wadamada badankood iyo naadiyada taranka dhammaan afarta eeyo waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin nooc isku mid ah oo leh noocyo kala duwan oo noocyada jaakad ah. Dhammaan afarta ey waxay wadaagaan heer nooc oo ka mid ah waddamada oo dhan marka laga reebo AKC, oo tan iyo 1959 u aqoonsan yahay inay yihiin noocyo gaar ah oo aan aqoonsanayn mid ka mid ah afarta (kan Laekenois ), halka UKC, oo sidoo kale ah diiwaangelinta Mareykanka, ay u aqoonsan tahay dhammaan afarta nooc inay yihiin hal nooc. Noocyo badan oo caqli badan, dhammaan afarta nooc ee adhiga Beljamka waxay ku fiican yihiin hibooyin kala duwan, oo ay ku jiraan laakiin aan ku xaddidnayn, shaqada booliiska sida, mukhaadaraadka iyo ogaanshaha bamka, ilaalinta iyo Schutzhund, raadinta iyo samatabbixinta, sidoo kale addeecidda, deg degga, raadinta, dhaqashada, barafleyda iyo jiidista gawaarida iyo hagaha indhoolayaasha iyo kaaliyaha naafada. Awooddan sare, eeyaha aadka u caqliga badan waxay u baahan yihiin hoggaan, si loola dagaallamo, oo maalin kasta si wanaagsan loo jimicsado sidaa darteedna aysan u ahayn qof walba, laakiin waxay la yeelan karaan saaxiib wanaagsan oo qoys leh milkiilayaasha saxda ah. Malium Belgian wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee afarta ido ah ee aasaasa nooc. Ilaa afarta kale qaab ahaan loo aasaasay waxaa loogu yeeri jiray 'Berger Belge a poil court autre que Malinois,' oo macnaheedu yahay 'Sheepdog-ga Beljim-ga ah ee Beljimka ah ee aan ahayn Malinois.' Maanta dhammaan afarta ido ayaa caan ku ah Belgium, iyadoo Laekenois iyo Malinois inta badan loo isticmaalo eyda nooca shaqeeya marka loo eego Beljamka Groenendael iyo Tervuren laakiin dhammaan noocyada wali waxay sameynayaan shaqaale heer sare ah.
Indy Groenendaeler sida eey
Aris waa 2-jir Biljim ah Groenendael oo reer Giriig ah
'Tani waa Sheepdog-gayga Beljamka, Wildland's Indiana Jones. Indiana waxay dhalatay Oktoobar 23,1992 waxayna dhimatay Ogosto 16, 2007. Ma weyddiisan karin wehel ka wanaagsan. Waxay ahayd qof caqli badan, waxayna lahayd dareen cajaa'ib leh. Ciyaar, saaxiibtinimo iyo dulqaad badan, Indiana waxay sameysan laheyd ciyaaro u gaar ah oo ay ila ciyaareyso. Way tartamaysay oo cinwaan looga dhigay Schutzhund, Adeecis, Raad-raadin, Dareen iyo Dhaqan. Waxaa lagu tilmaamay Mareykanka iyo Kanada ka hor intaysan soo saarin pyometria oo la sii daayay. Waxay sidoo kale ahayd Ey Daaweyn Shahaado leh, oo heshay shahaadadeeda Imtixaanka Dabeecadda iyo CGC-da. Waxay sidoo kale ka gudubtay tijaabo heer sare ah oo Ey Biyo ah oo loogu talagalay Newfies. Indiana waxaa la siiyay Abaalmarinta Jet ee Abaalmarinta Geesinimada markii ay iga badbaadisay qof weerar ku soo qaadi lahaa. '
Eygan wuxuu ahaa mid cajiib ah. Markii aan barayay dhaqankeeda, marwalba way isku dayi jirtay oo waligeed ma joojin. Way jeclayd tamashle u bax aniga ila jooga beerta, aniga oo ceyrsanaya Frisbees iyo dabaasha. Waxay ahayd gabar dabaasha gabi ahaanba cajiib ah. Waan u sheegi karay joogitaankeeda intaan biyaha ku jirno oo aan ku tuuro tooydeeda. Waxay ku soo qaadan jirtay amar, markii ay kalabar soo laabatana, waan ka dalban jiray inay jiifsato. Xusuusnow, biyahani waxay dul mareen madaxeeda, ee sidee bay u jiifsatay? Waxay kufilmaami lahayd oo keliya wax ay ku sii joogi karto. Markii aan ku qasbo inay timaado, way dabaalan jirtay oo hortayda iman jirtay ka dibna dabin baa ku kellifi lahayd inay dul joogsato.
Sababtoo ah waxaan ku tartarnay goobo kala duwan oo lagu ciyaaro isboortiga eyga, wax badan ayaan soo tababarnay, waxaan aaminsanahay inay tahay sababta ay si aad ah isugu dheellitirneyd. Ma xasuusan karo inay waligeed xakamayn weyday ama shucuur ahaan la cabudhiyay.
Eeg tusaalooyin badan oo ah Adhijirka Belgium
Sawirada Shepherd Belgium 1
isku dhafka sternard iyo poodle
shih tzu oo leh cillad hoos u dhac ah